Họtelu ndi di na Calabar, Cross River - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Mee nkpaghari na Calabar
Calabar nwere ike ịnya isi maka ọtụtụ ihe akụkọ nke mgbe ochie ndị di ka “Ogbako otú ndị mbụ na enwe mmekorita na Nigeria bu nke akporo "The Africa Club" na okwu beeke, asompi egwuregwu ukwụ di nkpa na egwuregwu ndị ọzọ ndi di ka egwuruegwu nte a na akpo (cricket na okwu beeke na nke hockey) Nigeria wechara onodu na Calabar. Na narị afọ (16th -19th), Calabar bụ ebe ọdụ ụgbọ mmiri mba ofesi maka nzipụ mmanụ nkwụ na itumgbere ahịa ohu.
Ebe Njem Nleta di na Calabar
Otutu ihe ndi ndi mbiara chiwa ochichi nwa beeke bu ndi a ka puru ihu ufodu na akuku ochie nke Calabar bu nke na eme ka obodo ahụ di nma na I lee anya ma o buru elefe anya na ofe-osimiri nke obodo Calabar. Ili nke Mary Slessor di oké egwu bụ ebe njem nleta di nkpa na Calabar. Calabar bụ otu n'ime obodo nke ihe ndị eji enwe anuri jupụtara na ya n’ime Nigeria, na afọ puku abụọ na anọ (2004) gọvanọ Cross River Steti, nwere ọhụụ nke ime ka Cross River Steti buru ebe isi nchikota maka njem nleta na ile ọbịa na Nigeria na mba Afrika. Ememe ngagharingosi a na eme na Calabar malite na abali mbụ rue na abali iri atọ na otu nke onwa iri na abụọ na afo nile bu bụkwa ihe njem nleta ozo puru iche.
Ulo onunu na Calabar
N'oge ememe ngagharingosi, I nweta ulo ebe onodu na Calabar na a bụ isi nchegbu. Ọ ka nma itinye akwụkwọ maka họtelu osiso tupu oge ememe a eru o na Calabar iji nweta ọnọdụ ebe di nma na obodo. Jumia Travel agbala mbo nke ukwu I ji hu na ha ga enye gị họtelu ndi di ọnụ ala na Calabar. Họtelu ndi di na Calabar ndi ọnụ ego ya di ala bu ndi dị ka Transcorp Họtelu na Monty Suite bu ndi ọnọdụ ha di na ebe a na ahu anya bu nke ga enye gi ohere I ga ọtụtụ ememe ngagharingosi ndi di iche iche. (Alaeze nke ndị madu) “Peoples paradise" bụ aha ndi njem nleta na ndị obodo Calabar nyere Calabar.